jeudi, 10 octobre 2019 14:20
Sambava - Tranga manaitra: Fikambanana mampiasa fitomboka mena
Tonga nanatona ny lehiben’ny Fokontany Ambatofitatra, Kaominina ambonivohitra Sambava ireo olona nahazo fanamarihana tamin'ny fandoavana adidy amin'ny fidirana amin'ny tany voatondro hozaraina ka samy mandoa 1 000 Ar, fa ny tsy mazava amin'izy ireo dia nahoana ny an’ny sasany toa fitomboka manga no tamin’ny karne nanamarihana ny fandoavam-bola ary ao kosa ny fitomboka mena?
Nanipika mazava tsara ny lehiben’ny Fokontany rehefa nanontaniana fa tsy izy no tompon'andraikitra amin'ity fa ireo milaza ho mpitarika ilay Fikambanana, ary na izy tenany aza mba taitra raha nahita izao fampiasana fitomboka mena izao, ka mametra-panontaniana hoe : tsy fahaizana sa fanahy iniana mba hamitahana ny mponina fa hoe ara-panjakana ny fizarana ny tany ?
Voatokana ho an’ny fanjakana ihany mantsy ny fampiasana ny fitomboka mena.
jeudi, 10 octobre 2019 12:42
Toamasina: Hampiantrano ny fankalazana nasionaly ny Andro manerantany ho an'ny fahitana
Lohahevitry ny fankalazana amin’ity taona 2019 ity ny hoe : "Tsinjovy ny fahitanao". Hisy tolotra ara-pahasalamana homena ny vahoaka izay tonga ao amin’ny Lapan'ny tanàna Toamasina anio mandritra ny hetsika.
Hisy fitiliana maso faobe, fitiliana katarakta sy ny aretina hafa mahazo ny maso. Maimaimpoana ny hetsika.
Velirano faha-5 nataon'i Andry Rajoelina, tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ny fahasalamana ho an’ny rehetra, tanjona lehibe amin'izany ny fahafahan’ny tsirairay mahazo fitsaboana mendrika sy manaja ny maha-olona.
Amoronakona: Misy « fuite » ny famokaran-drano
Nitondra fanazavana ny minisitry ny angovo sy ny rano ary ny akoran’afo, Andriamanga Vonjy, manoloana ny tsy mbola maha tomombana ny famatsian-drano miainga avy amin’ny foibe famokaran-drano vaovao naorina eny Amoronakona hamatsiana ny mponina amin’ny ilany atsinanan’Antananarivo.
Tapabolana izay no efa nahavitan'ny fotodrafitrasa eny an-toerana saingy mbola tsy afaka misitraka ny rano fisotro madio ireo mponina mijaly rano noho ny olana ara-teknika samihafa.
Misy « fuite » maro, hoy ny fanazavana. Noho io fanatsarana ny lafiny teknika io, izay hiasana andro aman'alina, dia lasa mitarazoka ny fanatsarana ny famatsiana rano ho an'ny faritra atsinanan'Antananarivo.
10 octobre: Journée mondiale pour la vue
10 octobre: Journée mondiale pour la vue.
jeudi, 10 octobre 2019 12:23
Bakalorea – « 2ème session »: Tsy misy « convocation » intsony
Manamafy ny avy eo anivon’ny ministeran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa tsy misy « convocation » intsony amin'ny « 2ème session exceptionnelle » hatao ny 23 ka hatramin’ny 26 oktobra 2019 fa ny « convocation » teo aloha ihany no hoampiasaina.
Manentana ireo mpianatra rehetra ny ministera mba samy hitahiry ny « convocation ».
10 octobre: Journée Mondiale contre la peine de mort.
jeudi, 10 octobre 2019 11:01
10 octobre: Journée Mondiale de la santé mentale.
jeudi, 10 octobre 2019 09:42
Fifamoivoizana: Hisy fanamboaran-dalana rond-point La City hatrany amin'ny rond-point Tsarasaotra
Hisy fanamboaran-dalana eo amin'ny lalana mihazo ny rond-point La City hatrany amin'ny rond-point Tsarasaotra, mandroso sy miverina, ka lalan-tokana ihany no ampifandimbiasana ampiasain'ny fiara na ny mandroso na ny miverina.